Afhayeenka Xisbiga Kulmiye Oo Sharci Daro Ku Tilmaamay Isbahaysiga...
Afhayeenka xisbiga Kulmiye oo sharci daro ku tilmaamay isbahaysiga…
Isniin, Juun, 7, 2021 (Wararka-Maanta) – Afhayeenka xisbiga Kulmiye Cabdinaasir Muxummed Xasan Buuni, oo waraysi siinayay BBC Somali, ayaa sheegay in xisbiyada mucaaradku ay afduubayaan xoriyada mudanayaasha lasoo doortay.
Buuni ayaa mucaaradka ku eedeeyay in ay ka leexdeen hab raaca uu sheegayo sharciga doorashooyinku.
“Waxanu jecel nahay in hab iyo hanaankii qanuunku dhigayay ay maraan, oo ah in natiijada hordhaca ah marka hore lagu dhawaaqo, in cidi cabasho qabta ay maxkamada sare u gudbiso, hadii ay u gudbin waydana natiijada rasmiga ah ay maxkamada sare ku dhawaaqdo” ayuu yidhi.
Wararka Maanta : Dibad-bax ka dhan ah KENYA oo ka dhacay Garbahaarey - Wararka Maanta
“Kadibna waxa la dhaarinayaa mudanayasha usoo baxay golaha wakiilada, fadhiga u horeeya madaxweynaha ayaa qudbad ka jeedinaya, kadibna mudanayaasha ayaa xildhibaanka ugu da’da wayn iska dooranaya, oo gaadhsiinaya shirgudoonka”.
“Marka hab ka ayuun baanu u aragnaa in UCID iyo Waddani ay ka leexdeen, isla markaana ay faragalin ku sameeyeen habka noocaasa ee qaanuunka dalku jidaynayo” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Buuni ayaa sheegay in loobahanyahay in axsaabta mucaaradku anay faragalin golaha inta laga dooranayo shirgudoon.
Wararka Maanta : Kylian Mbappe Oo Si Maldahan U Sheegay In Shaki Laga Qabo Mustaqbalka Paris...
“Waxanu jecel nahay sidii markii horeba aanu u wada soconay ee aanaan u faro galin, doorashada socodkeedi, ku dhawaaqisteedi, in aan maantana loo faro galin inta mudanayaasha lasoo doortay ay dooranayaan shirgudoon” ayuu yidhi.
Buuni ayaa sheegay in isbahaysiga axsaabta mucaaradku uu ka dhiganyahay in mudanayaashi lasoo doortay xoriyadoodii la qaatay.
“Mudanihi lasoo doortay ee ku yimiday rabitaankii shacbiga ayaa awoodiisi la qaday, oo xisbiyo ku heshiiyeen” ayuu yidhi.
Hadalka afhayeen Buuni aya ka hor imanaya hadal uu shalay jeediyay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbgiga Kulmiye Axmed Cabdi dheere, oo isbahaysiga mucaaradka ku tilmamay xaq dastuuri ah.
Wararka Maanta : Deg Deg: Xogta kulanka MD Farmaajo & RW Rooble, Fashilka Shirkii...
Related Topics:AfhayeenkadaroFeaturedisbahaysigaKULMIYEsharcisomaliweyn wararka maantatilmaamayWararka Maantawararka maanta - bbcwararka maanta 2020 somaliwararka maanta 2021wararka maanta ethiopiawararka maanta hiiraan onlinewararka maanta muqdishowararka maanta muqdisho 2021Xisbiga
Sirdoonka Maaliyadeed ee Imaaraadka oo heshiisyo Is-afgarad ah la saxiixday…
Wararka Maanta : Madaxweynaha Puntland oo ku baaqay in ilaaliyo fulinta hehsiiska doorashada...
Wararka Maanta : Ciidamada Xoogga dalka oo dagaal culus kadib la wareegay deegaanka Orshe ee...
Wararka Maanta : RW Rooble oo shir guddoomiyay Shirka Golaha Wasiirada (SAWIRRO)
Wararka Maanta : Rooble, Qoorqoor & Guudlaawe oo la kulmay Safiirka Mareykanka...
Wararka Maanta : Axmed Madoobe iyo Deni oo qaaday tallaabo meesha ka saartay eedeyntii...